Weerar Gaadhi loo adeegsaday oo dhacay magaalada Münster ee dalka Jarmalka. – Xeernews24
Weerar Gaadhi loo adeegsaday oo dhacay magaalada Münster ee dalka Jarmalka.
7. April 2018 /in WARAR/NEWS /von admin
Wararka naga soo gaadhi magaalada Munster ee waqooyika dalka Jarmalka ayaa sheegi in maanta uu qof aan wali la ogayn waxaa u yahay uu gaadhi jiidhsiiyey meel suuq ah oo wakhtiga dad fara badan su sugnaayeen.
Sidda ay sheegeen ciidamadda Poliska iyo kooxaha gurmadka deg deg ah waxay sheegeen in ay jirto dhamasha iyo dhaawac fara badan, maanta oo ah maalin sabti ah oo suuqyadda magaalooyinka ay ka tukaamaystaan dad macaamiil badan ayay markaste suuragal tahay dhimashadda iyo dhaawacu inta ka badaan.
Wararka ugu dambeeyey ayaa sheegi in dhimaashadu tahay 2 qof halka dhaawacana lagu sheegey ugu yaran 20 qof oo qaarkood dhaawaca soo gaadhi halis yahay.
Qofka gaadhi waday ayaa la soo wariyey in uu isla goobta ku dhintay.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/02/Breakingnews.jpg 168 300 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-04-07 18:01:302018-04-07 18:01:30Weerar Gaadhi loo adeegsaday oo dhacay magaalada Münster ee dalka Jarmalka.
Daawo Video:Sheikh Saciid Raage 00 sheegey in taarrikhdda aduunku wareegto. Xulumadda Jabuuti Oo Maanta aad mooddo in ay ka badhdegtay canaanihii loo soo...